Weera har’a Liyyu Poolisiin Wayyaanee Mi’eessotti banteen ilmaan Oromoo daangaa biyyaa tiiksuuf dirmatanii wareegaman nama saddeet gahanii jiran. - Oromia Shall be Free
Weera har’a Liyyu Poolisiin Wayyaanee Mi’eessotti banteen ilmaan Oromoo daangaa biyyaa tiiksuuf dirmatanii wareegaman nama saddeet gahanii jiran.
1) Maammee Huseen
2) Yaassin Yuusufaa yaasiin yuusufaa
3) Haaji Ahmadoo Badhaasoo
4) Alii Shunaa
5) Usmaan Muummee Baadhasoo
6) Ahmad Uttoo
7) Musxafaa Abdi
8) Ammee Alii Iloo
Rabbi jannatatti wareegamtoota isaan dura dabranitti haa maku. maatiifi firoottan isaanii akkasumas ummata Mi’eessoof jajjabina hawwiina. Gumaa isaanii baafachuun itti fufa!!
Previous ‘I can’t pay’: taxing times for small traders in Ethiopia hit by 300% rate hike
Next Akkamitti hajjii fii umraa goona?